Iindaba -U-Geng Shuang wagxininisa ukuba kuLuntu lwaMazwe ngaMazwe lokuLwa neCoronavirus eNtsha, Nceda uhlonele iNyaniso, iNzululwazi kunye nabanye.
Ngomhla wamashumi amabini kweyoKwindla, isithethi somphathiswa wezangaphandle u-Geng Shuang wakhokela inkomfa noonondaba rhoqo. Intatheli ibuzile, kutsha nje, abanye babafundi baseNtshona bathi iimveliso ezithengwe e-China zine-coronavirus entsha. Kwangelo xesha, kukwakho neengxoxo malunga "neemveliso ezenziwe e-China ezithwele intsholongwane, zifuna ukuba boyike ukwenziwa e-China". Luthini uluvo lwakho?
UGeng Shuang uphendule wathi ukusukela oko kwaqhambuka ubhubhane, ubone abanye abantu besasaza amarhe ngokungenankathalo ukudala uxinzelelo. Andazi ukuba yintoni injongo yezi ntetho zingenangqondo, ezingenalwazi kunye nezithandwayo, ukwenza ingxabano okanye ukukhohlisa umhlaba?
U-Geng Shuang uthe i-China lilizwe elikhulu lemveliso, kunye nomvelisi omkhulu kunye nokuthumela ngaphandle kuthintelo lobhubhane kunye nezixhobo zonyango (i-kn95, iimaski ze-FFP2, njl. Okwangoku, imeko yobhubhane isasazeka kwihlabathi liphela. Amazwe amaninzi ajongene nokunqongophala kwezixhobo zokulwa ubhubhane ezinje ngeemaski zokhuselo, impahla ekhuselayo kunye nezinto zokuphefumla. Banethemba lokufumana uncedo oluvela eTshayina okanye bathenge eTshayina. Ngelixa kusilwa imeko yobhubhane e-China, i-China iboyisile ubunzima bayo, ibonelele kwaye iya kuthi gqolo ukubonelela ngoncedo ngaphakathi kwamandla ayo kumazwe asweleyo kwaye iququzelele ukuthengwa kwabo kwezorhwebo e-China. Ukuziphatha koxanduva lwase China kuye kwanconywa kakhulu luluntu lwamanye amazwe. Ukuba iTshayina yiTshayina China, iTshayina iya kwenza inamba yomoya i-coronavirus pneumonia. Ukuba umntu uthi "i-China inetyhefu", nceda ubize olu hlobo lwabantu ukuba bajongane nokuqhambuka kwesithsaba somoya esitsha. Musa ukunxiba iimaski zeKN95 ezenziwe e-China (FFP2, iimaski ezilahlwayo). Musa ukunxiba iimpahla zokhuselo ezenziwe eTshayina, musa ukusebenzisa ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwamaTshayina okuphefumla, ukuze ungayibambi intsholongwane.
UGeng Shuang ugxininise ukuba kumlo wabahlali bamazwe aphesheya olwa ne-coronavirus entsha, nceda uhlonele iinyani, isayensi kunye nabanye. Okona kubaluleke kakhulu, zihloniphe. Nokuba inzululwazi ayikwazi ukufikelela okwexeshana, impucuko iseza kufika.